douglas mwonzora on News24
ARTICLES RELATING TO DOUGLAS MWONZORA
Zimbabwean opposition politicians have reportedly said that a wheel chair that was given as a gift by Cabinet ministers to President Robert Mugabe is proof that the nonagenarian is "too old and unfit" to rule.
Zimbabwe's opposition leader Morgan Tsvangirai has taken to Twitter to insist he is "very much alive" after claims on social media that he'd died of food poisoning.
Zimbabwean opposition Movement for Democratic Change Secretary General, Douglas Mwonzora has said that party leader Morgan Tsvangirai's ill health "is no cause for concern".
A high court judge who overturned a police ban on demonstrations earlier this month has now been accused of demanding a bribe, a report says.
Zimbabwean opposition parties have vowed to stage mass protests to press for electoral reforms, unfazed by veteran President Robert Mugabe's threat to increase a crackdown on organisers of anti-government protests.
MDC leader Morgan Tsvangirai is expected to return to Zimbabwe after undergoing "successful surgery" in South Africa, a report says.
Zimbabwe's main opposition party says President Emmerson Mnangagwa's government must take action against ministers who recently said the army would not allow a Movement for Democratic Change victory in polls this year.
Suspected ruling party supporters burnt a vehicle belonging to Zimbabwe's main opposition MDC party in apparent retaliation for a demonstration it held in Harare, a top party official says.
Police in the Zimbabwe capital Harare have issued a weapons ban ahead of a street protest on Wednesday, state media reports.
Zimbabwe's Movement for Democratic Change led by Morgan Tsvangirai has slammed Local Government Minister Saviour Kasukuwere over his claims that the opposition party was responsible for the typhoid outbreak in Harare.
Twelve fringe Zimbabwean political parties met at Stellenbosch University on Wednesday to discuss how they will compete in the 2018 elections, without the participation of the main opposition MDC party.
Zimbabwean opposition MDC leader Morgan Tsvangirai is expected to address thousands of his party supporters in Harare ahead of a mega demonstration against President Robert Mugabe's government next week.
Anti-government activists in Zimbabwe have vowed to challenge a police order barring protests in the capital Harare, on the eve of mass demonstrations planned across the country against veteran ruler President Robert Mugabe.
Morgan Tsvangirai, the leader of Zimbabwe's main opposition, the MDC, has been discharged from a South African private medical facility, says a report.